Reopen Plan / Soomaali: Reopen SPPS
Soomaali: Reopen SPPS
SPPS waxay qorsheynaysaa inay waxbarashada qof ahaanta iskoolka la imaanayo u billowdo dhammaan ardayda fasallada 6-12 ee rabo waxbarashada laga billaabo Arbacada, April 14.
Maalmaha intaa ka horreeyo, ardayda waxay sii wadan doonaan waxbarashada durugsan halka aynu annagu ka sii shaqeyn doonno ballaarinta barnaamijka caawinta qof-ahaaneed kaas oo ardayda qaarkood u billowday bishii February. SPPS waxay raaci doontaa dhamaan tallaabooyinka caafimaadka iyo bed-qabka sida lagu sharraxay Qorshaha Waxbarashada leh Bedqabka ee Minnesota iyo SPPS COVID-19 Tilmaamaha Ardayda iyo Qoyska.
Waxbarashada Qof ahaanta la Imanayo Iskoolka
Waxbarashada Khadka Intarnetka (Virtual)
Ardaydu waxay wax ku baranayaan fasalka gudihiisa iyaga iyo macallimiintoodba iyagoo raacayo jadwal la gaabiyay Isniinta ilaa Khamiista
Ardaydu waxay wax ku bartaan iyagoo jooga guriga maalmaha Jimcaha
Ardaydu waxay wax ku bartaan guriga maalmaha Isniinta ilaa Jimcaha
Wakhtiga fasalka la joogo waxaa la helayaa duruus cusub iyo caawinta ardayda
Duruusta waxaa badankooda la qaataa iyadoo ay kala maqan yihiin macallinka iyo ardayga
Laba saacadood oo waxbarasho uusan macallinku kula joogin guriga lagu sameynayo Isniinta ilaa Khamiista
Macallimiintu waxay maalintii haystaan hal saac oo loogu talogalay saacadaha xafiiska iyo caawinta ardayda online-ka wax ku barata
Macallimiintu waxay ardayda xaadiriyaan Isniinta ilaa Khamiista; maqnaanshaha waa in la soo sheego
Ardaydu waxay iska xaadirinayaan aaladda Campus
Ardaydu waxay sii wadayaan inay dhammaystiraan casharrada ku jiro Schoology iyagoo isticmaalayo iPad-kooda
Ardaydu way u wareegi karaan waxbarashada khadka intarnetka (virtual) inta ka harsan sannad-dugsiyeedka
Ardayda doorata waxbarashada khadka intarnetka waxay ku sii jiri doonaan waxbarashada khadka intarnetka inta ka hartay sannad-dugsiyeedka
Wararka Cusub ee Quseeya Qorshaha Dib-ugu-noqoshada Iskoolka
Warkii u Danbeeyay ee Dib ugu Noqoshada Iskoolka: March 25, 2021
Warkii u Dambeeyay ee ku saabsan Waxbarashada Iskoolka Qof ahaanta loo Imaanayo ee Ardayda Dugsiyada Sare - March 3, 2021
Laga bilaabo Abriil 14, ardayda si shaqsi ah wax u barata waxay joogi doonaan dugsiga 4.5 saacadood Isniinta ilaa Khamiista, iyadoo 2 saacadood ee shaqada iskoolka lagu dhammayn doono guriga.
Warkii u Dambeeyay ee ku saabsan Waxbarashada Iskoolka Qof ahaanta loo Imaanayo ee Ardayda Dugsiyada Sare
Warkii u Danbeeyay ee Dib ugu Noqoshada Iskoolka: February 10, 2021
Warkii u Dambeeyay ee ku Noqoshada Iskoolka: January 28, 2021
Tilmaamaha Caafimaadka & Bedqabka ee u Dambeeyay
SPPS waxay raaceysaa dhammaan shuruudaha iyo talooyinka lagu soo bandhigay Qorshaha Waxbarashada iyo Bedqabidda ee Minnesota. ⬇️
Gafuur-xirrada iyo Weji-daboollada
Ardayda fasallada K-12, shaqaalaha iyo booqdayaasha waxaa looga baahan yahay inay xirtaan gafuur-xir haddii aan looga reebin xaalad caafimaad ahaan. Ardayda ah Pre-K waxaa si adag loogu dhiirigelinayaa inay xirtaan weji-daboolka haddii ay sidaas sameyn karaan iyagoo u hoggaansamaya hagaha CDC. Qof walba waa inuu keensadaa weji-daboole isaga gooni u ah marwalba oo ay suuragal tahay. Si kastaba ha noqotee, gafuur-xirrada ayaa loo heli doonaa qof kasta oo u baahan oo iskoolka joogo ama baska saaran.
Sida waafaqsan Qorshaha Waxbarashada Bedqabka leh ee Minnesota, degmada SPPS waxay ka shaqeyn doontaa inay ardayda siiso goob waxbarasho oo ay kala fogaan karaan ugu yaraan 3 tallaabo ama ka badan. Iskoolladu waxay sida ugu macquulsan xaddidi doonaan isku darka ardayda isnta iskoolka la joogo maalintaas oo dhan si loo yareeyo khatarta loona dhimo halista isqaadsiinta xanuunkan. Waxaa muhiim ah in la ogaado in duruufaha qaarkood ay u baahan karaan in ardayda iyo shaqaaluhu isku dhowaadaan (sida markuu ardaygu xiranayo kabaha, ama ardayga oo la siiyo caawin xagga shucuurta ah).
Baarista iyo La-socoshada Caafimaadka
Baarista calaamadaha COVID-19 oo joogto ah ayaa ah habka ugu fiican ee si dhakhso badan loogu ogaan karo astaamaha xanuunkan lagu garto. Ardeyda, shaqaalaha iyo dadka iskuullada soo booqda waa in ay la socdaan wixii calaamado ah ee ay qabi karaan ka hor inteysan imaan iskuulka/shaqada, haddana mar kale markay yimaadaan dhismeyaasha SPPS, iyo weliba maalintii oo dhan. Qof waliba waa inuu la socdo caafimaadkiisa maalintii oo dhan hadba wixii is beddela si uu u doonan karo gargaar.
Calaamadaha COVID-19 waxaa ka mid ah: qufac cusub ama neefsashada oo yaraata AMA ugu yaraan 2 ka mid ah waxyaabaha soo socda: qandho (100.4ºF ama wax ka sarreeya) ama dareemidda qandho, qarqaryo, daal, murqa-xanuun, cune-xanuun, madax-xanuun, cabbur shafka ah, dareenka urka ama dhadhanka oo la waayo, shuban, matag, ama lallabbo.
Ka jawaab afarta su'aalood ee hoose ka hor inta aadan ilmahaaga u dirin iskuulka:
Dhawaan miyaa ilma aan dhalay laga helay inuu qabo COVID-19?
Miyaa ilma aan dhalay lagu arkay calaamadaha COVID-19 sida kor ku qoran?
Miyey dhacday qof la nool ilma aan dhalay in la baaray oo laga helay COVID-19 ama lagu arkay calaamadihii COVID-19?
Miyey ilma aan dhalay isku dhawaadeen (6 tallaabo ama dhudhun fogaan ka yar, kana badan 15 daqiiqadood) qof dhawaan laga helay COVID-19?
Haddaad HAA uga jawaabtay mid ka mid ah su'aalaha kor ku qoran:
Iskuulka ha u soo dirin lmahaaga xanuunsan, ee soo sheeg sababta maqnaanshaha, oo la xiriir dhakhtarka ilmahaaga.
Habka SPPS ee Soo-sheegidda Intarnetka ee COVID-19 noogu soo gudbi calaamadaha aad ilmaha ku aragtay ama haddii ay isku dhawaadeen qof xanuunkaas qaba
Waaxda Dhismayaasha ee SPPS
Waaxda Dhismayaasha ayaa iyagoo mashquul ah diyaarinaysay iskoollo iyo dhismayaal bedqab u leh shaqaalaha iyo ardayda. Hawo wareegto oo hagaagsan, nadaafad-dhismeed maalinlaha ah, iyo xusuusinta bedqabka oo lagu dhejiyay iskoolada oo dhan ayaa ah qaar ka mid ah tallaabooyinka badan ee la qaadayo si loo hubiyo in si bedqab leh dib loogu soo noqdo iskoolka.
Xog dheeraad ah oo ku saabsan qorshaha dhismayaasheenna waxaad ka heli kartaa halkan: spps.org/Page/40753
Nadaafadda & Jeermis-dilidda
Caafimaadka iyo Fayoqabka Ardayda, Kooxda Adeegyada Deegaanka (ESG), Amniga iyo Maareynta Degdegga ah, iyo shaqaalaha nadiifiyo iskoollada ayaa si dhow uga wada shaqeynaya si loo hubiyo bedqabka ardaydeenna iyo shaqaalaheenna. Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxay raacaan qorshe nadiifin afar-heer ah oo looga jawaabayo warbixinnada la xiriira calaamadaha iyo/ama ogaanshaha xanuunka COVID-19.
Shaqaalaheenna daryeelka waxay si weyn u kordhin doonaan tirtirka iyo nadiifinta meelaha dadweynaha iyo meelaha taabashadu ku badan tahay ee dhismayaashayada inta ay socoto waxbarashada iskoolka maalin kasta. Waxaan sidoo kale macallimiinteena iyo shaqaalaheena siin doonnaa qalabka nadiifinta si ay u nadiifiyaan oo u jeermiska uga dilaan oogada meel walba, hadba sida loogu baahdo.
Habeen kasta, kooxdayada nadiifinta waxaynu si buuxda u nadiifin doonnaan oogada meelaha dhismahayaga, iyaga oo mar kale jeermiska ka nadiifinaya meelaha taabashadu ku badan tahay sida baafka alaabta lagu dhaqo, ilaha biyaha laga cabo, qafisyada albaabka, miisaska iyo kuraasta.
Ardayda waa in lagu dejiyo bannaanka hore ee laga soo galo iskoolka. Qoysku uma kaxeyn karo ardayda fasalladooda ama meelkasta oo ka mid ah gudaha iskoolka. Intaas waxaa sii dheer, qoysaska looma oggolaan doono inay ka qadeeyaan iskoolka, ama kormeeraan fasal, ama si mutadawacnimo ah uga shaqeeyaan fasalka, ama inay ku lug yeeshaan waxqabadyo kale oo ka socdo gudaha iskoollada
Ardayda basaska soo raacaysa waxaa lagu qori doonaa kuraas cayiman si loo xaqiijiyo kala dheereynta ardayda iyo in ay arrintaasi naga caawiso qaabkii loola xiriiri lahaa ardayda iska ag dhow fadhi ahaan.
Daboolidda wejiga ayaa looga baahan yahay dhammaan ardayda K-12 iyo wadayaasha basaska, waxaana si adag loogu boorinayaa ardayda Pre-K inay iyaguna xirtaan gafuur-xirka.
Imaanshaha iyo Tegitaanka
Shaqaalaha iskoolka ayaa kormeeri doona goobta uu basku imanayo iyaga oo la kulmaya bas kasta, kormeeraya tirada ardayda ka soo dageysa hal mar, iyo iyagoo ku dhiirrigelinayo ardayda inay ilaaliyaan kala fogaanshaha dadweynaha. Iskoolladu waxay dejin doonaan qaab ardayda loo soo fasaxo markay xiisaddu dhammaato, qaabkaas oo kaalmo u ah kala fogaanshaha dadweynaha.
Qoysasku waxay mas'uul ka yihiin hubinta calaamadaha ardaydooda ka hor inta aysan aadin goobta baska laga raaco.
Nadiifinta iyo Jeermis-tirtiridda
Basaska waxaa maalin kasta laga dilaa jeermiska. Darawallada ayaa nadiifin doona aagagga taabashadu ku badan tahay inta u dhaxeysa rarka ay qaadayaan.
Haddii cimiladu saamaxdo, daaqadaha ayaa furnaan doona si ay uga caawiyaan kordhinta wareegga hawada
Adeegga Cuntada Shakhsi ahaanta loo Qaadanayo
Dugsiyada Dadweynaha ee SPPS waxay baddeleen hanaankeenii caadiga ahaa ee adeegga cuntada ee iskool kasta. Shaqaalaha kafateeriyada iyo kormeerayaal xilliga qadada yimaado kafateeriyada ayaa caawinaad ka geysan doona socodka taraafikada, nadaafadda, iyo adeegga macaamiisha. Quraac bilaash ah iyo qado ayaa la siin doonaa dhammaan ardayda inta lagu jiro waxbarashada iskoolka la imaanayo.
Adeegyada quraacdu way sii socon doonaan iyagoo wax yar laga beddelay iyo sidoo kale qaar ka mid ah liiska cuntada. Ardaydu waxay sii wadi doonaan inay quraac ku cunaan fasalkooda. Kafateeriyada iskoolka waxaa loo isticmaali doonaa in lagu bixiyo oo lagu cuno qadada. Miisaska ayaa loo dhigi doonaa qaab lagu xoojinayo kala fogaanshaha dadweynaha, iyo ardayda isku kooxda ah way kala durqi doonaan markay wax ka cunayaan kafateeriyada. Calaamadaha iyo waxyaalo ku dheggan dhulka ayaa ka caawin doona in ardaydu xasuusato inay ilaaliyaan kala fogaanshaha dadweynaha. Looxyo wax kala qeybiyo ayaa la dhex dhigi doonaa shaqaalaha iyo ardayda safka qadada ku jiro, weel daboolan ayaa beddeli doona saxanka qadada ee caadiga ah.
Dhismayaasha aan lahayn kafateeriyo weyn oo saamixi karo raacidda tilmaamaha kala fogaanshaha dadweynaha, waxaa fasallada loo isticmaali karaa inay noqdaan goob lagu cunteeyo. Shaqaalaha waaxda nafaqada ayaa diyaarin doona oo xirxiri doona cuntada, kuna ridi doona cuntooyinka weel gooni ah iyagoo geynayo fasallada. Nidaam ah nadaafadda gacmaha ayaa loo diyaarin doonaa dhammaan ardayda iyo shaqaalaha, shaqaaluhuna waxay xiran doonaan weji-daboole oo leh gaashaanka wajiga marka ay cunnada siinayaan ardayda.
Qaadista Cuntada & Keenidda
Tilmaamaha u Dambeeyay ee Karantiilka SPPS
Tilmaamaha caafimaadka dadweynaha ayaa dhowaan isbeddelay oo ku saabsan karantiilka COVID-19 sababo la xiriira isku dhowaansho. Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxay cusboonaysiyeen tilmaamahooda si wax looga qabto isbedelladan.
Dadka ka ag dhow qof qaba COVID-19 waxay faayruska ku qaadi karaan inta u dhexeysa labo ilaa 14 maalmood kadib markii ugu dambeeyay ee ay ka ag dhawaayeen qofkaas. In kasta oo ay wali ugu fiican tahay karantiil ah muddo 14 maalmood ah, dib u eegis lagu sameeyay xogaha xanuunkan waxay tilmaamaysaa in maalinta 10-aad ay aad u yaraaneyso halista qaadista COVID-19 iyo faafintiisa.
Intaas waxaa sii dheer, karantiillada wakhtigooda la dheereeyey waxay si xun u saameyn karaan dakhliga, waxbarashada, iyo xaaladaha kale ee caafimaad ee dadka karantiilka galay. Wax ka beddelidda shuruudaha karantiilka waxay ka caawin kartaa yareynta saameynta uu COVID-19 ku yeesho dadka iyo bulshada iyadoo wali la ilaalinayo kuwa kale.
Iyada oo lagu saleynayo arrimahan, SPPS waxay wakhtiga karantiilka ka yareysay 14 maalmood iyadoo ka dhigtay 10 maalmood duruufaha qaarkood. Sinnaba uma joojin kartid karantiilka 10 maalmood ka hor.
Shuruudaha u Guuridda Waxbarashada Durugsan
Xeerarka gobolku waxay ku dhiirrigelinayaan iskoollada gobolka inay eegaan dhowr arrimood markii ay go'aan ka gaarayaan "dib-u-noqoshada" ama in si ku-meel-gaar ah dib loogu noqdo waxbarashada durugsan. Tilmaamuhu ma qoondeeyaan tirada kiisaska COVID-19 ee degmada tiradaasoo keeni karto u wareegidda waxbarashada durugsan.
SPPS waxay sii wadi doontaa waxbarashada shakhsi ahaanta iskoolka loo imaanayo iyadoo la raacayo shuruudaha hoose:
Waaxda dowladda heer gobolka iyo heer degmaba waxay xaqiijinayaan in qorshaha iskoollada u degsan uu raacayo tilmaamayaasha lagu sheegay Qorshaha Waxbarashada iyo Bedqabidda
Iskoolladu waxay fulinayaan oo ay kormeerayaan baratakoollada caafimaad iyo bed-qab ee heer gobol iyo heer degmaba. Tan waxaa ka mid ah kala fogaanshaha bulshada, wejiga oo la daboolo, dhuumaha hawada qaado ee fasallada, hawlaha gacmo-dhaqashada, iyo helidda fursado ah baaritaanka 'COVID'.
Kiisaska la soo sheegay ee COVID-19 oo mar walba lala socdo iyo in wax looga qabto si waafaqsan Tilmaamaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH). Tan waxaa ka mid ah raadinta ardaydii isku dhoweyd fasalka, dabaggalka ilaha cudur kasta, in la ogaado tirada kiisaska xanuun ee laga helo dhismaha/fasalka, iyo raacitaanka shaxanka go'aanka MDH ee iskoollada loo dejiyay (kor ku xusan).
Waa in la helaa macallimiin ku filan iyo shaqaale kale oo diyaar u ah inay sii wadaan waxbarashada shaqsi ahaanta goobta la imaanayo.
Markii la ogaado inaan shuruudahaan laga soo bixin, waxaa dhici karo isbeddel ku-meel-gaar ah oo ku yimaado qaabka waxbarashada ee hal fasal ama hal iskool. Go'aannada ku saabsan beddelidda qaabka waxbarasho waxaa gaari doona degmada iyadoo la tashanaysa waaxaha dowladda heer gobol iyo heer degmaba.
Caawinta qof ahaaneed ee la siinayo ardayda dhigato dugsiga sare inta ay
Intii aan u diyaar garowbaynay inay ardayda dugsiga hoose billaabaan waxbarasho ay qof ahaan iskoolka u imaanayaan, waxaan sidoo kale qorsheynaynay qaabab aan ardaydayada dugsiga sare dhigato ku siin karno taageero dheeraad ah. Caawintaan waxbarasho ee shaqsiyeed waxaa la bixin doonaa Isniinta ilaa Khamiista. Maalmaha Jimcaha waxay noqon doonaan maalmo ay ardayda dugsiyada sare qaadanayaan waxbarashada durugsan oo aan isku wakhti aheyn. Jadwallada gaarka ahi way kala duwanaan doonaan iyadoo loo eegayo iskoolka iyo fasalka uu ardaygu dhigto. Fadlan ogow waxay sidoo kale tani ka dhigan tahay in la beddeli karo jadwalka waxbarashada durugsan ee haatan jiro.
Waxbarashada Durugsan ee Iskoolka Virtual Learning School (fasallada PreK-5)
Ardayda ka diiwaangashan iskoolka Virtual Learning School waxay billaabi doonaan February 1. Codsiyadii ahaa u guurista iskoolka Virtual Learning School ee la sameeyay wixii ka dambeeyay January 11 waxaa lagu daray liiska sugitaanka. Codsiyadaas dib u eegid ayaa ku socoto oo qoysaska waxaa lagu soo wargelin doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
April 12-13: Maalmaha kala-guurka - Iskool uma jiro ardayda dugsiyada sare (fasallada 6-12)
April 14: Maalinta u horreysa waxbarashada qof ahaanta iskoolka loo imanayo ee ardayda dugsiyada sare
Talooyinka COVID-19 ee Ardeyda iyo Qoysaska
Qoysasku waa inay iska bartaan tilmaamahan, oo si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa tilmaamahaan iyagoo isla markaana ka hadlo xeeladaha ka hortagga xanuunka, baaritaanka iyo ka warqabka caafimaadka, qaabka la isku karantiilo, iyo Nidaamka SPPS loogu soo Gudbiyo Warbixinta COVID-19.